आज २०७६ माघ २८ गते मंगलबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस - Rapti Khabar
मुख्य पृष्ठ /मुख्य समाचार/आज २०७६ माघ २८ गते मंगलबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
4096minutes read
२०७६ माघ २८ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
मेष -अरूको भर पर्दा लक्ष्यमा पुग्न समस्या पर्नेछ। आफन्तको सहयोग जुट्नाले चिताएको काम भने सहज रूपले बन्नेछ। अध्ययनमा विशेष प्रगति हुनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनुका साथै नयाँ जिम्मेवारी हातलागी हुनेछ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा उछिन्न सकिनेछ। पहिलेको कमजोरी समाप्त हुनेछ। फाइदाका लागि काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। बलभन्दा बुद्धिले लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले सम्झौताको ढोका खोल्नेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन पनि कसिलो हुनेछ।
बृष -सोखले खर्च निम्त्याए पनि इच्छाशक्ति बढ्नाले लक्ष्य प्राप्त गर्ने साहस जुट्नेछ। सरल जीवनशैलीले धेरैलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा आँटेको काम सम्पादन हुनेछ। साझेदारीमा अलि सावधान रहनुपर्ला। अरूको बहकाउमा परिनाले सोमवार र मंगलवार केही काम बिग्रने सम्भावना देखिन्छ। तापनि बुधवारदेखि मित्रहरूको सहयोगले हौसला प्रदान गर्नेछ। पहिलेको उपलब्धिले पनि साता अनुकूल बन्नेछ। मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले काम लिने प्रयत्न गर्नुहोला।
मिथुन -सुरुमा विवादास्पद काम गर्नुपरे पनि सोमवारदेखि विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने समय छ। शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले काममा फाइदा हुनेछ। बीचमा घरेलु समस्या देखिने हुँदा सावधान रहनुहोला। कुरा लगाउनेहरूले सम्बन्धमा फाटो उत्पन्न गर्न सक्छन्। समस्या आए पनि हिम्मत गर्दा चुनौती पन्छाउन सफल भइनेछ। सप्ताहान्तमा भौतिक साधन जुट्नेछन् भने सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ।
कर्कट -सुरुमा खानपानको असावधानीले स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई मनन गर्नुहोला। विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि सद्विचारले प्रेरित हुनेहरूलाई फैदै हुनेछ। बुधवारदेखि अरूको दबाबमा परिने सम्भावना छ। सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा पर्नेछन्। समस्या पर्दा आफ्नैले साथ नदिन सक्छन्। अरूको विश्वासमा पर्दा धोका पाइनेछ। गलत निर्णयले समस्या निम्त्याउन सक्छ। सप्ताहान्तमा भने स्थितिमा सुधार आउनाले धेरै काम सम्पादन हुनेछन्।
सिंह -प्रारम्भमा खर्चिलो काम गर्नुपर्ने हुँदा अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। तापनि रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सोमवारदेखि आफन्तहरू नजिकिए पनि परिस्थिति आफ्ना लागि चुनौतीपूर्ण रहनेछ। केही काम बीचैमा रोकिन सक्छन्। तापनि शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई मनन गर्नुहोला। सद्विचारले प्रेरित हुनेहरूलाई परिस्थिति अनुकूलै रहनेछ। अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ। व्यावसायिक काममा भने मिहिनेत गर्दा राम्रै उपलब्धि प्राप्त हुनेछ।
कन्या -प्रारम्भमा प्रशस्त लाभ हुनाले आम्दानीको क्षेत्र फराकिलो देखिनेछ। तर सोमवारदेखि खर्चिलो काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। सरसापटमा धन बाहिरिने सम्भावना देखिन्छ। आफन्तबाट टाढिनुपर्ने स्थिति आए पनि भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने समय छ। प्रयत्न गर्दा लामो यात्रा गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। बुधवारदेखि तारिफयोग्य कामले लोकप्रियता दिलाउनेछ। रमाइलो भेटघाट र खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ। तर स्वास्थ्य र धनको सुरक्षामा सजग रहनुहोला।
तुला -प्रारम्भमा केही विवादास्पद काममा जुट्नुपरे पनि दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा राम्रै अवसर पाइनेछ। आम्दानीका स्रोत सबल बन्नेछन्। पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। तर बुधवारदेखि ठुलो लगानी गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। खर्च लागे पनि यात्राको अवसर जुट्नेछ। आम्दानी भने पनि लाभांशको आधा हिस्सा अरूका लागि खर्चनुपर्ला। सप्ताहान्तमा रमाइलो भेटघाट हुनेछ। आफन्तको सहयोगले हौसला प्रदान गर्नेछ। अजीर्ण हुनाले स्वास्थ्य कमजोर रहला।
बृश्चिक -प्रारम्भमा केही चुनौती देखिए पनि सामाजिक क्षेत्रबाट हौसला प्राप्त हुनेछ। पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। प्रतिष्ठित काम हातपार्न सफल भइनेछ। मंगलवारदेखि थप अवसर प्राप्त हुनेछन्। विभिन्न भौतिक साधन जुटाउन सफल भइनेछ। लगनशीलताले नाम, दाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। प्रयत्न गर्दा नयाँ काम थालनी हुन सक्छ। अध्ययनमा प्रगति र व्यवसायमा राम्रै आम्दानी हुनेछ। तर धनमाल सुराक्षामा भने अलि सावधानी अपनाउनुपर्ला। सप्ताहान्तमा फजुल खर्चले मन अलि खिन्न हुनेछ।
धनु -प्रारम्भमा अस्वस्थताका बाबजुद कामको बोझ बढ्नेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अरूको स्वार्थमा उपयोग भइएला। सोमवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ भने नयाँ अवसरले उत्साह जगाउनेछ। सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै फेला पर्नेछन्। रोकिएको काम बन्नुका साथै नयाँ काम सुरु हुनेछ। लगनशीलताले अप्ठ्यारा समस्या सुल्झाउँदै सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। काममा सामान्य चुनौती देखिए पनि बिस्तारै लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। सप्ताहान्तमा आम्दानी बढ्नेछ।
मकर -प्रारम्भमा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। प्रियभेट हुनाले मनमा आनन्द मिल्नेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। तर सोमवार र मंगलवार अर्थ अभावले सताउन सक्छ। अप्ठ्यारा कामको बोझ उठाउनुपर्ला। चोटपटकको योग देखिएकाले सवारी एवं हातहतियारको उपयोग सावधानीसाथ गर्नुहोला। बुधवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले काममा जोसजाँगर बढ्नेछ। धार्मिक कर्म र समाजसेवामा प्रवृत्त भइनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। सप्ताहान्तमा विवादास्पद जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ला।
कुम्भ -प्रारम्भमा प्रतिस्पर्धीहरूले दु:ख दिए पनि कर्मयोगले फाइदा दिलाउनेछ। खर्च लागे पनि मिहिनेत गर्दा विशेष अवसर हात पार्न सकिनेछ। पारिवारिक भेटघाटले मन प्रफुल्लित हुनेछ। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ भने मिहिनेत गर्दा चिताएको काम बन्नेछ। तर परिस्थितिवश केही झमेला पनि बेहोर्नुपर्ला। बुधवार र बिहीवार काम रोकिन सक्छ। स्वास्थ्य–चिन्ताले पनि सताउनेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा असहज परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सकिनेछ। धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा प्रवृत्त भइनेछ।
मीन -स्वास्थ्यचिन्ताले सताए पनि साता फलदायी नै रहनेछ। मिहिनेत गर्दा राम्रै उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ। व्यापार र उद्योगमा फाइदा हुनेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। कामको सफलताले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरू बढ्नाले काममा केही परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। व्यवसायका लागि यात्रा गर्ने अवसर जुर्न सक्छ। मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेमको गाँठो समेत कसिनेछ। सप्ताहान्तमा परिस्थितिजन्य व्यवधान हुनाले काममा केही समस्या पर्न सक्छ।
अवतरण गर्न लागेको विमान चिप्लिएर ३ टुक्रा भयो
क्यापिटल मर्चेन्टको कर्जा अपचलन : छानबिन गर्न ऋणीको माग
भाइटीकाको भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा!